Inkululeko yezomnotho: Umnotho uyaphila - Bayede News
Home » Inkululeko yezomnotho: Umnotho uyaphila
Inkululeko yezomnotho: Umnotho uyaphila
Enye yezinsika zelokishi iClermont iwile
KUNOLIMI olujwayele ukukhulunywa ngabantu oluthi umuntu obengusomabhizinisi uwile. Lokhu baye bakusho kalula nje kumuntu obenebhizinisi wagcina engasenalo. Ngangikuzwa kushiwo kubantu ababenezitolo kumbe amabhasi nezinye izinhlobo okwakuthi uma esevaliwe amabhizinisi abantu ababukela kude bathi bawile, ngoba sebegibela nabo izitimela namabhasi. Lokhu kwenzeka kuwo wonke amazinga nakunoma yiziphi izinhlobo zezimboni. Umnotho uyaphila ngenxa yalokho umelwe wukukhula usuku nosuku. Uma ungakhuli kusuke kunokuthile okudinga ukulungiswa. Uyadinga ukondliwa uhlolwe ngezikhathi ezifanele.
Ziwiswa yini izimboni? Njengomuntu ibhizinisi liyadinga ukondliwa ukuze liphile. Ngumnikazi bhizinisi owaziyo ukuthi kwenzekani ebhizinisini lakhe. Noma enolwazi kuyadingeka athole iseluleko kumuntu ongaphandle kwebhizinisi ozobuka ngeso lokuhlola bese enika izeluleko ezizokwelapha lapho kudingeka ikhambi khona. Ziningi izindlela zokwelapha ibhizinisi uma lingenwe wubuthakathaka noma lingakhuli. Kungaba wukuletha lolo sizo oludingekayo noma ukuhlangana nelinye kuphume elisha. Kwesinye isikhathi kumuntu obukela kude kuyaye kube sengathi ibhizinisi noma imboni iwile kanti igwinywe ngenye noma yadayiselwa abanye. Ngokolimi lomnotho akukhulunywa ngokuwa kodwa kuthiwa iyavala imboni, uma abanikazi benquma ukuvala iminyango. Konke lokho kuchaza ukuthi umnotho ufana nomlilo othi uma sewuwubasile ulokhu uwukhwezela ukuze uhlale uvutha. Awukwazi ukuwubasa bese uwushiya bese ucabanga ukuthi uzovutha unomphela.
Ibhizinisi phela lifuze umuntu ngandlela thize. Ngenkathi lisungulwa lisuke lizalwa bese liphila ngenkathi kusetshenzwa kulo. Uma kuchazwa impilo yomuntu kuthiwa uyazalwa akhule aphile bese efa. Lokhu kuzwakala njengento emfushane kodwa kuwumjikelezo othatha isikhathi esithile okudlula khona wonke umuntu ozelwe. Lo mjikelezo awuhambi ngebala, futhi awuhambi ngobuqembu nobulili. Indaba enkulu ilapha ekuphileni. Ukuphila kunemidanti nemininingwane eminingi. Kwesinye isikhathi indlela umuntu aphila ngayo yiyo eyenza ibe yinde noma sibe sifushane isikhathi asiphilayo umuntu.
Uma ngibheka umnotho oncike ebhizinisini nawo ulandela umjikelezo ofuze owomuntu. Liyazalwa kumbe liqale, kusetshenzwe libe nempilo. Ekuhambeni kwesikhathi liyafika esikhathini sokukhathala lidinge ukuvuselela nokubuyekezwa ngandlela thize. Kungalesi sikhathi lapho amanye amabhizinisi efadalala aphele khona. Ziningi izinto eziletha ukufa emnothweni. Njengomuntu ibhizinisi liyondliwa ukuze liphile. Uma lingakutholi ukondliwa ligcina livalile.
Ukuvala kwemboni kwesinye isikhathi kusho ukuphela kwegama laleyo mboni. Kumuntu obukela kude kungaba wukuvala kanti abanikazi bemboni banqume ukuhlangana nabanye kuvuke imboni noma inkampani entsha. Phela ukusebenza ngawedwana kuyenza imboni ingasebenzi ngokwamandla ayo wonke. Kuhle umnikazi-mboni avume ukuhlangana nabanye noma kwesinye isikhathi kungasho ukushintsha kwegama ayesungule ngalo imboni.
Kunezinto ezenza izimboni zigcine zivalile. Kubalulekile ukubuka wazi ukuthi inkampani ethize yehlulwe yini ukufinyelela ezingeni ezinye izinkampani ezifiyelela kulo. Kwesinye isikhathi imboni ivaliswa wukuthi isuke seyiphile iminyaka eminingi. Kule minyaka eminingi abanikazi basuke bengakaze babuyekeze izindlela ephila ngazo imboni. Lokhu kwenza kube nezinto ezenzekayo ezingahloliwe ezingafanele ukwenzeka bese ziletha izifo ezigcina ziyibulele imboni.
Kanti yini ngempela engalimaza izinkampani zize zivale iminyango zidilize abasebenzi? Singakusho kalula nje sithi wumnotho, kodwa kuthanda ukujula kunalokho kwesinye isikhathi.
Athwala nzima amabhizinisi engakhokhelwa esesebenzile
Umhlaba uyaphenduka, kuthi ngokuphenduka kwawo kube nesidingo sokuthi kubuyekezwe indlela ibhizinisi elenziwa ngayo. Ukuguquka kwesimo somnotho ezweni kuyayiletha ingcindezi ezimbonini nasezinkampanini. Kuyisifo esiwudla buthule umnotho enkampanini. Kubiza ukuba umnikazi wemboni abuyekeze indlela asebenza ngayo usuku nosuku noma inyanga nenyanga.
Iqiniso lithi, noma yikuphi okuphilayo kuyadinga ukuvuselelwa kuhlolwe usuku nosuku ukuze kuqiniswe izindawo ezixegayo kumbe ezibuthaka. Kubalulekile kumuntu osemnothweni ame ngamazonzwane usuku nosuku abhekisise ukuthi usemi ngomumo yini. Izinto ziguquka usuku nosuku emhlabeni ziphoqe ukuthi umuntu azihlolisise ukuthi usesendaweni enempilo yini kanti usahambisana yini nesikhathi.
Kuyadingeka ukuthi abanikazi bemboni bazinike ithuba lokubuka bahlole ukusebenza kwayo okungenani kanye ngonyaka. Lokhu kuyadingeka ebhizinisini noma ngabe lingakanani. Akunampilo ukuvuka usebenze imindundu ngaphandle kokuhlolwa yilabo abahlola impilo ukuthi akukangeni sifo yini. Njengomuntu, ibhizinisi kuyenzeka liphile kanti sekunesifo esinamathele esicashile elihamba naso esingelapheka ngokungenelela kochwepheshe.
UMnu uLindani Dhlomo unguMqondisi kwaMind Tunes (Pty) Ltd. Ungaxhumana naye ngezikhathi zonke ku- lindani@mindtunes.co.za
Bayede News May 18, 2018